Manchester United oo diyaar u ah inay iibiso mid ka mid ah xiddigaheeda khadka dhexe si ay Real Madrid ugu garaacdo saxiixa Van de Beek – Gool FM
(Manchester) 14 Juun 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay diyaar u tahay inay iibiso mid ka mid ah xiddigaheeda khadka dhexe si ay naadiga reer Spain ee Real Madrid ugu garaacdo Van de Beek.
Red Devils ayaa doonaysa inay ku guuleysato tartanka loogu jiro saxiixa xiddiga Ajax ee Van de Beek, iyadoo isaga baxi karta xiisihii ay u qabtay Havertz.
Jariiradda The Star ayaa warinaysa in Manchester United ayaa diyaar u tahay inay hurto xiddigeeda Andreas Pereira si ay u hesho ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Ajax, Donny van de Beek.
Real Madrid ayaa kula tartamaysa 23-sano jirkaan reer Netherlands, iyadoo la soo sheegayo in Manchester United ay heshiiskiisa u dhaqaaqi doonto marka ugu horreysa ee uu furmo suuqa kala iibsiga, waxayna ka horreysiin doontaa saxiix kasta oo kale oo ay damacsanayd inuu xagaagan yimaaddo garoonka Old Trafford.
Haddii Red Devils ay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka ka ciyaara horyaalka Eredivisie, waxa ay u badan tahay inay soo gabagabayso tartankii ay ugu jirtay xiddiga Bayer Leverkusen ee Kai Havertz.
Si ay kooxda Macallin Ole Gunnar Solskjaer ugu garaacdo Los Blancos saxiixa Donny van de Beek oo horay loo sheegay inay heshiis la gaartay kooxda ka dhisan caasimadda Spain waxa ay suuqa dhigayaan Andreas Pereira.
Kooxaha Newcastle, Everton iyo West Ham ayaa dhammaantood xiiseynaysa saxiixa Andreas Pereira, kaasoo ku dhibtoonaya inuu boos joogto ah ka helo kooxda ku dheesha garoonka Old Trafford.